Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseNigeria zokuPhula » UkuTwitter lilungelo lomntu-naseNigeria
IBhodi yezoKhenketho yaseAfrika • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • ulwaphulo-mthetho • inkcubeko • Education • ukonwatyiswa • Iindaba zikaRhulumente • Amalungelo abantu • iindaba • Iindaba zaseNigeria zokuPhula • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Safety • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku
Amashishini aseNigeria, abasebenzisi bayakugweba ukumiswa kwe-Twitter kweli lizwe
INigeria ilahle amabala amahlanu, ukuya kwi-120, kwi-2021 ye-World Press Freedom Index equlunqwe yi-Reporters Without Borders, echaze iNigeria njengelinye lamazwe "anobungozi kwaye anzima" eNtshona Afrika kwiintatheli.
Urhulumente waseNigeria kulindeleke ukuba angavali i-Twitter 'kungekudala'.
Urhulumente waseNigeria u-Twitter unqabe ngokubanzi kwilizwe.
Inkululeko yokuthetha iyehla ngokukhawuleza eNigeria.
Emva kokuzoba ukubuyela umva phakathi kwabasebenzisi beendaba zosasazo kunye nabalweli bamalungelo oluntu ngokunyhashwa kwenkululeko yokuthetha kunye nokwenzakalisa iindlela zokwenza ishishini eNigeria, urhulumente welona lizwe linabantu abaninzi e-Afrika wathi 'ulindele' ukuba asuse isibhengezo sakhe ku-Twitter, wabhengeza ngoJuni. , "kwiintsuku ezimbalwa".
Isibhengezo siphakamise ithemba phakathi kwabasebenzisi be-Twitter abanomdla wokubuyela kwiqonga leendaba zosasazo kwiinyanga ezintathu emva kokunqunyanyiswa kusebenze.
Umphathiswa Wezolwazi wase-Nigeria u-Lai Mohammed uxelele abezindaba kwi-khabhathi ukuba namhlanje urhulumente uyalazi ixhala Twitter Ukuvalwa kwakuyile phakathi kwabantu baseNigeria.
"Ukuba umsebenzi unqunyanyisiwe malunga neentsuku ezili-100 ngoku, ndinokuxelela ukuba sithetha nje ezimbalwa, zimbalwa iintsuku ngoku," utshilo uMohammed, ngaphandle kokunika ixesha.
Xa wayecinezelwa ngakumbi, uMohammed wathi abasemagunyeni kunye namagosa kaTwitter kwakufuneka “babeke ii-I ze banqumle ii-T” ngaphambi kokufikelela kwisivumelwano sokugqibela.
"Kuza kubakho kakhulu, kungekudala, thabatha ilizwi lam," utshilo umphathiswa.
Urhulumente waseNigeria unqunyanyisiwe Twitter ekuqaleni kukaJuni emva kokuba inkampani isuse isithuba kuMongameli u-Muhammadu Buhari owayesoyikisa i-secessionists yengingqi, ethi le ngxilimbela yemidiya yoluntu yaphula imithetho yayo. Igqwetha jikelele laseNigeria laqhubeka lathi abo bangafuniyo ukuvalwa kufuneka batshutshiswe.
Ukuphendula, uninzi lwabantu baseNigeria kunye neqela lamalungelo alapha bafaka isimangalo kwinkundla yengingqi befuna ukuphakamisa ukuvalwa kukarhulumente kwi-Twitter, bechaza ngesigqibo sokurhoxisa ukusebenza kweqonga losasazo njengelinge lokuzama ukugxeka ukugxekwa.
Ngaba ubulungisa base-US bonakalisiwe? Amaxhoba ama-B737 amaXa ayengenalo ithuba ...
I-IOC: Imidlalo yeOlimpiki yeHlabathi ka-2032 iya kubanjwa ...
Iphetshana lokuGonya amaPolisa laseFrance laseParis alinanto eCafés
I-Ryanair yenkomo yendlela yeBudapest kunye neShannon entsha ...
I-CDC: Nasiphi na isitofu esivunyiweyo yi-WHO KULUNGILE ukungena kwe-US
Umtsalane wesiqithi saseLa Digue
Yintoni eNtsha eBahamas ngo-Okthobha
Kutheni uNobhala-Jikelele we-UNWTO uZurab Polokashvili waye ...
I-8 kwaba-10 baseMelika ixhasa iiPasipoti zokugonya
AmaTshayina e-Commerce Giant ukuseta iNqwelomoya entsha
Intsholongwane kunye noKhenketho zihambela eHawaii
I-2022 hacks zokuhamba: Elona xesha lilungileyo lokubhukisha iinqwelomoya kunye neehotele
IZiko loLondolozo lweMbali laMhlanje laManje (iMoco) livula ngo ...